I-bungalow enefenisha esezingeni eliphezulu eTamhini Ghat, eRaigad - I-Airbnb
I-bungalow enefenisha esezingeni eliphezulu eTamhini Ghat, eRaigad
Sanaswadi, Maharashtra, i-India
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Arvind
Itholakala phakathi kwezintaba zaseTamhini, eKonkan (85km ukusuka ePune), 2BHK enefenisha ngokugcwele ye-AC Bungalow, impophoma/ ukubukwa kwentaba kukulungele ukuphumula. Iza nendawo yokupaka izimoto ezizimele kanye nengadi. I-villa inamakamelo okulala ama-2, amagumbi okugeza angu-2, i-TV yesikrini esiyisicaba se-Tatasky, ikhishi elihlome ngokuphelele (kufakwe nefriji) elinendawo yokudlela ehlukile kanye nomjiko wokuziphumulela. Izivakashi ezivakashela i-bungalow zingapheka noma yini eziyifunayo, (izitsha negesi kunikezwe). Izindawo zokudlela eziningi eziseduze.
Le bungalow ilungele ukuphumula ezingalweni zemvelo. I-bungalow inendawo yokuhlala yangaphandle, ikhoneni le-barbeque nendawo engadini.
Abafisa ukwenza amaphathi, bangajabulela ngasese ngaphandle kokuphazamisa omakhelwane.
Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, omatilasi abangu- 5
4.63 · 30 okushiwo abanye
Indawo eyingqopha-mlando eseduze ekugcineni kwe-Tamhini Ghat kanye nokuqala kwesifunda sase-Raigad. Izivakashi zingahamba nje kuze kube impophoma, zijabulele futhi zibambe ukudla okuvela kuma-dhaba namahhotela aseduze. Futhi, izindawo eziningi zokuthwebula izithombe ngaphakathi kwendawo yomphakathi nangaphandle kwesango futhi.
Izindawo eziseduze ongazivakashela ngesikhathi sokuhlala:
I-Pali/Mahad Ashtavinayak Temple, i-Kundalika River Rafting, i-Devkund waterfall, i-AndharbanTrek, i-Raigad Fort/ i-Janjira Fort, i-DiveAgar, amabhishi e-Harihareshwar ngomzila we-Mangaon, i-Kashid Beach ngomzila we-kolad, i-Adlabs Imagica, njll...
Umsingathi akekho endaweni, kodwa uhlala efinyeleleka ngekholi noma ngomlayezo. umnakekeli onomthwalo wemfanelo ukhona futhi eduze kwendawo ukuze axazulule noma yikuphi ukukhathazeka futhi akusize ube nokuhlala kahle.